साङ्लोले दुख दिएर हैरान हुनुहुन्छ ? घरेलु उपायले सजिलै भगाउनुस् - Sakaratmak Soch
साङ्लोले नसताएको घर कमै भेटिएला । अँध्यारा कुनाकाप्चामा लुकेका साङ्लाहरू फुत्तफुत्त निस्केर तपाईंलाई हैरानै गर्छन् होला ।गर्मी र बर्खाका बेलामा साङ्लाको संख्या ह्वात्तै बढ्छ । अनि त कहिलेकाहीँ पकाइराखेको तरकारी वा मुछिराखेको पीठोसहित साङ्ला फाल्नुपर्ने आवश्यकता आइलाग्छ । बजारमा पाइने स्प्रेले साङ्लालाई मार्छ तर त्यसमा भएको रसायनले स्वास्थ्यलाई हानि पनि पु–याउँछ । यहाँ हामी केही घरेलु उपाय बताउँछौं जसको प्रयोग गर्दा साङ्ला पनि भाग्छन् र स्वास्थ्य पनि खराब हुँदैन ।
पुर्खाले के भनेँ, हामीले के बुझ्यौ र के बुझ्नु पर्थ्यो ? मुख्य कुरा
से’ क्सगर्दा किन आवाज निकाल्छन् महिला ? (कारणसहित)
बिहान सबेरै स्नान गर्दा जप्नुस् यो मन्त्र, धन प्राप्तिसँगै शान्ति मिल्छ
यसैले बिहे गरेका महिला ताक्छन् अविवाहित केटाहरु